इटहरी । प्रदेश नम्बर–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षणको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मुस्लिम आयोगले मंगलबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्बद्धन र सशक्तिकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले मुस्लिमहरुको हक अधिकार र सशक्तिकरणको लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मुस्लिम समुदायको हक अधिकारको संरक्षण संवैधानिक रुपमा भइसकेको दावी गर्दै राईले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा आयोगले काम गर्ने बताए । उनले मुस्लिम समुदाय भित्रको लंैगिक हिंसा र असमानताको बिषयमा सबै मुस्लिमहरु एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिए ।
मुस्लिम आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे प्रदेश स्तरीय सुझाव संकलन गर्न गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का मुस्लिमहरुले आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए । आयोगले पहिलो पटक आयोगको तर्फबाट सुझाव संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का मुस्लिमहरुको सहभागिता थियो ।
रुकुम हत्याकाण्डको विरोधमा चर्किन थाल्यो आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप
काठमाडौं । पश्चिम रुकुममा भएको बर्बर हत्याको विरोधमा देशभर आनदोलन चर्किएको छ । देशभरका दलित समुदा...
धनकुटावासीलाई खुसीको खबर, धनकुटामै कोरोना परिक्षण ल्याब सञ्चालनमा आउँदै
धनकुटा । देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला सरकारले कोरोना परिक्षणको दायरा पनि बढाइरहेको छ । तर ज...
सामुदायीक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने प्रस्तावमा मन्त्रीकै आयो लिखित असहमति
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेटमा आएको सामुदायिक विद्यालयक...
प्रशासनको इजाजत विना ल्याइएका हरियो तरकारी गरियो नष्ट
अर्घाखाँची । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति विना ल्याइका हरिया तरकारी प्रहरीले नष्ट गरेको छ । ...
आरडीटी पोजिटिभ देखिएका ४ जनालाई यसरी राखियो भैंसी गोठमा
दैलेख । सरकारले कोरोना संक्रमितहरुलाई राख्न पर्याप्त आइसोलेसन भएको दावी गरिरहेका बेला आरडीटी परीक...
डा. बाबुराम भट्टराईले भने, म भट्टराई पछि ‘कामी’ लेख्छु तपाई पनि लेख्नुस्
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रुकुममा जातीय विभेदका नाममा गरिएको पाँच युवकक...